We stand as one and stand against oppression! #OromoProtests – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWe stand as one and stand against oppression! #OromoProtests
Abiy Maaliif Lammaa jibbe?
Lammaan waan ummata biratti jaalatamuuf, Lammaa of-biraa yoo darbe malee waan jaalatamuu fi faarfamu itti hin fakkaanne.
Amma Lammaa fi Xayibaa ofirraa darbeera.
Shimallis illee maanoo tuqsiisee jira; yeroo eeggata malee, innis darbama.
Dabareen ittaanu Taakkalaa Uumaa ti. Taakkalaanis yoo Abiy bira dhaabbatu, Abiy gatiin isaa waan xiqqaate itti fakkaata.
Taakkee jalaa miila dhahuun jalqabameera. Koreen itti ijaaramtee jirti.
Yeroo gabaabaa keessatti ‘Free Takele Uma’ jechuun keenya hin oolu.
Hundaafuu, bakka jirtanitti #GaaddisaWaliifTahuu hin dagatiinaa!
#FreeOromia #OromoProtests #oromummaafirst
“Dhiis dhiis dhaadannoo akkasii! Bara hiriira mormii master plan sana ture. Yeroo sana akkumma guutuu Oromiyaatti mormiirra waan jirruuf anis ta’e hiriyoonni koo hiriira baane. Iddoon isaa gara baha Oromiyaatti ture. erga tuutni barattootaa akkasuma hawaasni naannoo wal ga’een booda dhaadannoo jechisiisuutu jalqabame, wal harkaa fuudhameedhaadannoon dhaadatame. Kanneen guyyaa gaa fa sanaa dhaadannoo dura bu’anii jechisiisaa turan keessa an isa tokkon ture.
Dhaadannoowwan dhageessifaman keessaa hangi tokkoo: master plan nii mormina!!! wayyaanee nii balaaleffanna!!! OPDO n bakka nun buutu!!! Finfinneen kan oromiyaati!!! Laga xaafoon, sabbataan, galaan,
buraayyuun kan keenya!!! Irratti dhalanne, irratti guddanne biyya keenya dhiifnee eessa deemna!? fi kkf jennee dhaadannee dhadachiisaa osooma deemnuu, an dhadannoo dura bu’uu ittuma fufeen akkas jechuun dhaadachiise: Sirni gita bittuu, ilmaan Tigray: murni TPLF wayyaaneen nun bulchitu, ABOn nu bulchuu qabaa!!! Impaayera Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte diignee Oromiyaa walabaa nii ijaarranna!!!
*Oromiyaan walaba nii baati!!! kan jedhu dhaadannoon dhageessise ture. gidduudhuma kanaan mucaan wayii fiigaa gara kootti achii as dhufee; dhiis dhiis dhaadannoo akkasii naan jedhe. maalif kan jedhu gaafii na biraa mucichaaf darbatamte turte. Innis deebisee Impaayera Itoophiyaa diignee kan jedhu kun dhaadannoo sirrii miti naan jedhe. Ihim “waa gad dhufa jette jaartiin daha wal’aaltee” jedhan jedheen yeroo sanatti garaagarummaa yaadaa uumu waanin hin barbanneef tole jedheen dhaadannoo addaan kutee nama biraaf dhiisee kanuma jedhamaa jiru jedheen gale. gara doormii kootti yeroon galu mucaan silaa maalif akkan dhaadannoo akkasii akkan hin dhaadachiifne na dhorke waan jedhun buusee baasuu eegale.
Mucaan ofii isaatiif eenyuun akka inni ta’e beekuu baadhus suuraa kaasaa waan tureef diyaaspooraa wajjin quunamtii qabaachuu hin oolu tilmaama jedhun qaba. (yoo kan yaadannu taate, yeroo sana nageenya hiriirtotaaf jecha namoonni suuraa kaasuun eeyamamuuf namoota muraasa akka ta’an beekamaadha). akkan tilmaametti namni kun diyaaspooraa biraa qajeelfama fudhachuu hin oolu kan dhaadannoo akkasii dhiisaa jedhuuf jedheen dhiise. Egaa qabsoon gara boqonnaa xumuraatti dhuftee jijjiiramni teessoo wayii ogguu dhufu diyaaspooraawwan nuti Impaayericha nii diigu jennee abdachaa turre Impaayericha suphuuf yeroo kufanii ka’anin arge. anis maal ta’an jarri kun Hayilee Fidaa hin yaadatanu moo? Hayilee fidaa hayyuu rakkoo sabaa furu jedhamee abdiin itti gatame erga biyya hambaa irraa gara Impaayerichaatti galee;
Impaayerattiin Oromoo hin jaal’anne kun hayyuu kana qacam gootee akka liqimsite maalif irraanfatanii? Jedheen, maal isaan waan baay’ee beekanii waan xiqqoo wal’aluun kun raajii natti taateho jedheen anoo silaas wal’alaadhaa maalin godharee ittuman dhiise. maal ree kunoo Impaayerattiin har’as isuma barte sanatti jirti kanuma argaa jirru kana.
Gara yaada kootti yemmuun deebi’u, hundeen rakkoo keenya har’aa dhaadannoof ejjennoo impaayericha diiguu lagachuu keenya akka ta’ee fi jela bultiin booyicha keenya har’as gaafas akka weedifame naaf gale.
Ilaalcha(ideology) nuti quba hin qabne, faallaa akeeka qabsoo
bilisummaa oromoo kan ta’e, impaayera haadha oromoo ganamaaf
galgala boossisu suphuuf, maqaa Itoophiyaa diimokiraatessuu jedhuun ilaalchi beekaniis ta’e osoo hin beekin mooraa qabsoo bilisummaa oromoo keessatti lallabame cubbuu qabsoo keenya irratti dalagame ta’uu namuu hubachuu qaba.
Kanaafuu namoota Impaayericha qarqara bool’aa jiru kana deebisanii utuubuuf oliif gadi fiigan lagachuu fi daboo itiyoophiyaa du’arraa baraaruuf waamamu kamiinuu lagachuun gara qabsoo bilisummaa oromoo fi walabummaa Oromiyaatti luucca’uun dirqama nama hundaati kan jedhu gamanumaanin dhaamsa koo dabarfadha.
“Gaafiin oromootaa durii hanga har’aatti mirga of bulchuu; gaaffii abbaa biyyummaati. yoo ejjennoon keenya kanarraa adda ta’e dhiigni hamma har’a gatii malee lola’ee”…. Weellisaa Ittiqaa Tafarii.
“Rakkoon Oromoo Itoophiyaadha; rakkoon itoophiyaa Oromoo dha”. Dr Gammachuu Magarsaa.
Gaa’ila Butii Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduutti raawwatame diiguun nagaa waaraa Oromiyaaf fiduudha!
Ana. Beekan Yoonaas, D/dolloo Oromiyaa!”